संकटमा नेपाली सीमा
काठमाडौं । भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले लिपुलेक–मानसरोवर राजमार्ग भारतीय भूमिमा निर्माण गरेको दावी गरेपछि नेपाल सरकार अध्ययन गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । अरुले नेपाली भूमि आफ्नो भनिरहदा अध्ययन गरेर केको लागि भद्रो हेरिरहेको हो ओली सरकार ?
भारतीय सेना हम्मेसी यसरी बोल्दैन । यसको अर्थ भारतले सेनालाई बोल्न लगाएर यसबारेमा चुप लाग्न नेपाललाई हप्काएकै हो । बुझे वा नबुझे पनि कूटनीतिक ज्ञाताहरु भन्छन्– भारतले नेपाललाई सैनिक थ्रेट दियो ।
नेपाली सेनालाई सहन गर्न गाह्रो भयो र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आवश्यकताअनुरूप प्रस्ट र जिम्मेवार ढंगबाट विधिसम्मत तथा उपयुक्त मञ्चबाट जवाफ दिने स्पष्ट पारेका छन् । नेपाली सेनालाई सरकारले सैनिक तरिकाको प्रतिक्रियाका लागि छुट दिएको छैन । सेना सीमामा के भइरहेको छ, सबै कुरामा अवगत छ, संविधानले सेनालाई रोकेको छ । अवको संविधान संशोधनमा सिमाना रुक्षाको प्रश्न आए सेनाले एक्सनमा जान पाउने अधिकार निश्चित गर्नुपर्छ भन्ने जनआवाज बिस्तारै उठ्न थालेको छ ।
सीमाबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय सेना प्रमुखको अभिव्यक्तिबारे कूटनीतिक च्यानलमार्फत बुझिरहेको बताए । सरकार कूटनीतिक नोट दिएर बुझ्ने, सेना जानकारीमा राख्ने अनि भारतले नेपाली भूभागमा सडकसमेत निर्माण गर्दैजाँदा स्वाधीनता सकिएन र ? भारतीय सेना प्रमुख नरवणेले नेपालमाथि अरू कसैको इसारामा पिथौरागढ–लिपुलेक सडकको विरोध गरेको आरोप लगाएर चीनलाई समेत तारो बनाएका छन् ।